Famerenana Blu-ray: Ny karavasy sy ny vatana
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Famerenana Blu-ray: Ny karavasy sy ny vatana
by Admin Desambra 19, 2013
by Admin Desambra 19, 2013 939 hevitra
Ny Whip and the Body dia ampahan'ny mahaliana ao amin'ny kanôn'ilay mpamorona sarimihetsika italiana Mario Bava. Raha resaka tantara dia lavitra ny asany tsara indrindra io. Mihetsika miadana izy, miaraka amina tsikombakomba mety ho sady tsotra no manakorontana. Na izany aza, raha ny tombam-bidy, ny ezaka tamin'ny 1963 dia anisan'ny zava-bitan'i Bava lehibe indrindra - ary izany dia milaza zavatra betsaka ho an'ny talen'ny ekipa iray izay ankasitrahana fatratra noho ny endriny miavaka sy manan-kery hita maso.
Ny script, nosoratan'i Ernesto Gastaldi (Torso), Ugo Guerra ary Luciano Martino, dia natao ho valin-tenin'i Italia tamin'ny fampifanarahana an'i Edgar Allan Poe an'ny Roger Corman - ary tena mahomby izany. Fotoana fohy taorian'ny niverenany avy tany an-tsesitany tany amin'ny tranobeny, dia novonoina i Kurt Menliff (Christopher Lee), andriana sadista. Saingy mbola lavitra ny fampijaliana ataon'ny fianakaviany, satria misoko ny mistery mamono olona sadomasochistic. Ny mpanatrika dia avela hanontany raha toa ny matoatoa Kurt manenjika ny trano na raha tompon'andraikitra amin'ny famonoana olona feno valifaty ny iray amin'ireo mponina ao aminy.
Ny karavasy sy ny vatana dia natao tamin'ny taonjato faha-19, noho izany dia manankarena miaraka amin'ny rivo-piainana Gothic izy, tsy mifanohitra amin'ny laharam-pahamehana nataon'i Bava, Black Sunday. Saingy notifirina miloko marevaka izy io, manasongadina manga sy volomparasy mareva-doko miaraka amina accents mena. Navoaka tamin'io taona io ihany koa tamin'ny Sabata Mainty naniry fatratra, The Whip and the Body dia nanampy tamin'ny famolavolana ny hoavin'i Bava amin'ny ho avy. Ilay sinematographer Ubaldo Terzano (Deep Red) dia azo antoka fa nandray anjara tamin'ny fomba fijery, saingy i Bava, tsy isalasalana, fa nanana fidirana betsaka.
Ankoatry ny sary, The Whip and the Body dia mendri-piderana ihany koa amin'ny mpilalao ao aminy. Christopher Lee (The Wicker Man) dia nahazo mari-boninahitra lehibe noho ny andraikitra lehibe nananany. Ireo mpankafy sarimihetsika italianina dia hahafantatra mpikambana mpikambana maro hafa sy ireo mpitovo tsy tapaka an'i Bava, toa an-dry Harriet Medin (Rà sy Black Lace), Luciano Pigozzi (Blood and Black Lace), Gustavo De Nardo (Black Sabbath) ary Tony Kendall (Return of the Evil Dead)
Ny Whip and the Body no nanampy farany ny fanangonana Bava an'i Kino Classic, miaraka amin'ny famoahana Blu-ray izay tena mitondra ny fiainana ireo sary manankarena. Ny sary misy famaritana avo lenta dia miharihary fa mainty noho ny famoahana DVD teo aloha, saingy, raha jerena ny rakitsoratr'i Kino, dia mino aho fa ny famindrana alokaloka dia fanehoana marina kokoa ny sarimihetsika. Ankoatry ny tranofiara, ilay fampisehoana tokana manokana dia fanehoan-kevitra an-tsoratra efa voarakitra an-tsoratra nataon'ny Tim Watch an'i Video Watchdog. Ny làlana feno fampahalalana, toy ny mahazatra, saingy koa misy daty mahatsikaiky (ie Lucas milaza ny anjara asan'i Lee "ho avy" ao amin'ny Star Wars: Episode II).
Toy ny ankamaroan'ny famokarana italianina tamin'ny vanim-potoana, nalaina sary niaraka tamin'ireo mpisehatra miteny ny fitenin-drazany avy eo ary nantsoina hoe. Ny kapila dia misy ny kinova italiana (miaraka amina lohateny mifanentana) miaraka amin'ny dub anglisy (misy olona manao ny tsara indrindra avy amin'i Christopher Lee fa tsy ilay lehilahy ihany). Toa maheno ny feon-kira remastered, ao anatin'izany ny isa tsy hay hadinoin'i Carlo Rustichelli (Kill Baby, Kill).
Miady hevitra momba ny sarisary The Whip and the Body eo amin'ny sary mihetsika malaza an'i Bava ny mpankafy, saingy tsy azo lavina ny sinematografia mahavariana azy. Na dia mety tsy ny fampidirana tsara indrindra amin'ny asany aza izany, ny karavasy sy ny vatana dia tokony hotakiana hijerena izay mety ho talen'ny fakana sary. Ny tifitra mahafinaritra an'ny tanan'i Lee matoatoa, nandro manga, nanakaiky ny aloka mankany amin'ny fakan-tsary dia iray amin'ireo sanganasa mahatalanjona.